Volavolan-dalàna Vaovao Hamela An’i Rosia Tsy Hiraharaha Ny Fanapahankevitra Iraisampirenena Momba Ny Zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2015 3:46 GMT
Toa hita ho fialàna ireo fanapahankevitry ny Fitsaràna Eorôpeana momba ny zon'olombelona ilay lalàna vaovao an'i Rosia (sary), fa mitaky fahalalahana bebe kokoa ireo fanovàna vao haingana natao tamin'ny votoatin'ilay volavolan-dalàna. Sary avy tamin'ny Wikimedia Commons.
Raha mieritreritra ianao hoe tsy mety misy ratsy kokoa noho izao intsony ho an'ny fiarahamonim-pirenena sy ireo fiarovana zon'olombelona any Rosia, diso ianao.
Ny 4 Desambra, ny Parlemantam-panjakana no nanao fifidianana mba handany ilay volavolan-dalàna № 931766-6, mitondra ny lohanteny hoe “Amin'ireo Fanovàna ny Lalàmpanorenana Federaly ‘ Amin'ny Fitsaràn'ny Lalàmpanorenana an'ny Federasiôna Rosiana.'” Ankehitriny, any anoloan'ny Filankevitry ny Federasiôna ilay volavolan-dalàna, efitra ambony indrindra amin'ny fanaovana lalàna ao Rosia. Tanjon'ilay volavolan-dalàna ny hamorona “rafitra manokana araka ny lalàna”, izay hanome alàlana ny Fitsaràn'ny Lalàmpanorenana Rosiana ho afaka hamerina hijery ireo fanapahankevitra iraisampirenena momba ny zon'olombelona mamely an'i Rosia. Raha hitan'ilay Fitsaràna fa misy fanapahankevitra manokana tsy mifanaraka amin'ny Lalàmpanorenana Rosiana, afaka ialàny tsotra izao fotsiny ilay izy.
Ny dikan'izany dia hoe, raha toa ianao mametraka fitoriana any amin'ny fitsaràna na sampandraharaha iraisampirenena hoe nisy lalàna Rosiana nanitsakitsaka ny zo maha-olombelona anao, mety ho tsy hisy dikany aminao ny onitra na ny fepetra atolotry ny fitsaràna iraisampirenena anao raha toa ny Fitsaràn'ny Lalàmpanorenana Rosiana mahita hoe mifanohitra amin'ny lalàmpanorenana Rosiana ilay fanapahankevitra iraisam-pirenena.
Ho fanampim-pahalalàna, novinavinain'ny Fitsaràn'ny Lalàmpanorenana Rosiana tamin'ny fanapahankeviny ny 14 Jolay 2015 io rafitra manokana araka ny lalàna io, milaza fa manana ny fahamboniana ny Lalàmpanorenana Rosiana manoloana ireo didy avoakan'ny Fitsaràna Eorôpeana momba ny Zon'olombelona. Amin'ny fampiharana azy, midika io fahamboniana io fa raha toa ka misy ny fifanoherana eo amin'ny Fitsaràna Eorôpeana amperinasa momba ny Zon'olombelona sy ny Lalàmpanorenana Rosiana, araka ny andikàn'ny Fitsaràna azy, ny Lalàmpanorenana Rosiana no hivoaka handresy.
Nahoana ny Fitsaràn'ny Lalàmpanorenana Rosiana no manao an'io? Satria nokapohan'ny Fitsaràna Eorôpeana momba ny Zon'olombelona tamin'ny didy fandoavana onitra 2,5 lavitrisa dolara ny governemanta Rosiana tamin'ny raharaha Yukos, niainga tamin'ny dingana fandoavan-ketra tsy rariny any Rosia.
Ilay volavolan-dalàna vaovao anefa, lasa lavitra mihoatra ny famoronana rafitra manokana araka ny lalàna ho an'ireo fanapahankevitry ny Fitsaràna Eorôpeana momba ny Zon'olombelona. Ny tena marina, natao izay niparitahan'ilay lalàna hihàtra amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena rehetra momba ny zon'olombelona.
Ohatra, tsy misy resaka Fitsaràna Eorôpeana momba ny Zon'olombelona mihitsy ao amin'ny voasoratra amin'ilay volavolan-dalàna. Ho solon'izay, mikasika ny “fanapahankevitr'ireo sampandraharaha miaraka amin'ny fanjakana ho an'ny fiarovana ny zon'olombelona ary ny fahalalahana” amin'ny ankapobeny ilay volavolan-dalàna.
Fanampin'izany, raha nivoatra tany amin'ny kaomity ilay volavolan-dalàna, niova ny lohanteny ka lasa ho fanapahankevitr'ireo “sampandraharaha iraisan'ny samy firenena” ilay “sampandraharaha misahana ny lalàna iraisan'ny samy firenena”. Niseho teo anelanelan'ny famakiana voalohany sy faharoa an'ilay volavolan-dalàna io fiovàna io:
6) manova ny Andalana fahatelo amin'ny Fizaràna faha XIII1 misy izao manaraka izao:
Fizaràna faha XIII1. RAHARAHA FAKANA AM-BAVANY MIKASIKA NY METY HAMOAHANA DIDIM-PITSARANA NAVOAKAN'NY SAMPANDRAHARAHA MPAMOAKA LALANA IRAISAN'NY SAMY FIRENENA HO AN'NY FIAROVANA NY ZON'OLOMBELONA SY NY FAHALALAHANA
6) manova ny andalana fahatelo ao amin'ny fizaràna faha XIII1 misy izao manaraka izao:
Fizaràna faha XIII1. Raharaha fakàna am-bavany mikasika ny mety ho fampiharana ireo fanapahankevitra an'ny sampandraharaha iraisampirenena ho an'ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny fahalalahana
Teo anelanelan'ireo famakiana, na ilay teny hoe “fanapahankevitra” постановления (didy) aza —ampiasaina rehefa mamoaka didim-pitsaràna— dia lasa решения (fanapahankevitra) malefaka kokoa, izay hahatonga ilay izy hampiharina amin'ireo fanapahankevitry ny sampandraharaha iraisampirenena rehetra ho an'ny zon'olombelona.
Nampisy adihevitra teny anivon'ny vondrona Rosiana misahana ny lalàna ireo fanovàna an'ilay volavolan-dalàna ireo.
Mino ilay mpitsara efa misotro ronono avy ao amin'ny Fitsaràn'ny Lalàmpanorenana, Tamara Morschakova, fa ho afaka alefa any amin'ny Fitsaràn'ny Lalàmpanorenana mba ho jerena araka ilay lalàna ireo atontan-taratasy nataon'ireo sampandraharaha toy ny Kaomity Mpiaro ny Zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana.
Ny Filoha Lefitry ny Kaomitin'ny Lalàmpanorenana sy ny Tranobem-panjakana, Dmitri Vyatkin (Rosia Mitambatra), eo ankilany, milaza fa manao tatitra fotsiny ireo sampandraharaha toy ny Kaomity Mpiaro ny Zon'olombelona fa tsy mamoaka “fanapahankevitra”, noho izany tsy misy idirany amin'ilay lalàna.
Adinon'i Vyatkin anefa, fa anisany anatin'ny Mpamolavola Voalohany tamin'ny Fifanarahana iraisampirenena mikasika ireo Zon'olontsotra sy Ara-politika i Rosia, izay manome alalana ny Kaomity mpiaro ny Zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana hamoaka didy mikasika ireo fitarainana manokan'ny tsirairay. Ny tena marina, tsy ela akory izay, namoaka didy mamely an'i Rosia ny Kaomity Mpiaro ny Zon'olombelona, nilaza fa manitsakitsaka ny Fifanarahana Iraisampirenena ilay lalàna manohitra ny LGBTI. Manana rafitra fandraisana fanapahankevitra mitovy amin'izany ihany koa ireo sampandraharaha iraisampirenena hafa sasany mpiaro ny zon'olombelona .
Fehiny, lasa fitaovana entina hanafenana ireo adidin'i Rosia amin'ireo zon'olombelona iraisam-pirenena ilay natao hoe fanapahankevitry ny Fitsaràna mihodinkodina manohitra ilay didy Yukos mametra ny handoavana 2,5 lavitrisa dolara (ary ireo didy mitovy amin'izany). Ho an'ireo fiarahamonim-pirenena Rosiana, fahapotehana tanteraka ny anaran'io. Raha lany io lalàna io any am-parany — ilay làlana tokana hiarovana ny zo fototra — dia hanome fanefitra sarintsariny fotsiny sisa ny sehatra iraisampirenena. Ny tena ilain'ny governemanta hatao mba hialàna amin'ireo sazy ireo dia mety ny famerenana ny fijerena azy hataon'ny Fitsaràn'ny Lalàm-panorenana eo ambanin'ilay rafitra manokana araka ny lalàna.